46 “Zvanzi naChangamire Ishe Jehovha, ‘Gedhi rechivanze chomukati rakatarira kumabvazuva+ rinofanira kuramba rakavharwa+ kwemazuva matanhatu anoitwa basa,+ asi rinofanira kuvhurwa pazuva resabata, uye rinofanira kuvhurwa pazuva rokugara kwomwedzi.+ 2 Jinda rinofanira kupinda nenzira yokuvharanda regedhi racho,+ richibva kunze, romira pedyo negwatidziro regedhi racho;+ uye vapristi vanofanira kupa chinopiwa charo chinopiswa chakakwana nezvibayiro zvaro zvokugoverana, uye rinofanira kukotama pachikumbaridzo chegedhi racho,+ robuda, asi gedhi racho harifaniri kuvharwa kusvikira manheru. 3 Vanhu vomunyika yacho vanofanira kukotama pasuo regedhi iroro pamasabata nepakugara kwemwedzi, pamberi paJehovha.+ 4 “‘Chinopiwa chinopiswa chakakwana chinofanira kupiwa Jehovha nejinda racho pazuva resabata chinofanira kuva makwayana makono matanhatu akanaka uye gondohwe rakanaka;+ 5 uye efa nokuda kwegondohwe kuti chive chinopiwa chezviyo,+ uye chinopiwa chezviyo nokuda kwegwayana gono zvarinokwanisa kupa,+ uye kana ari mafuta, hini paefa imwe chete.+ 6 Pazuva rokugara kwomwedzi+ panofanira kuva nenzombe duku, mukono unobva paboka remombe, wakanaka, nemakwayana makono matanhatu negondohwe; zvinofanira kunge zvakanaka.+ 7 Anofanira kupa efa nokuda kwenzombe duku uye efa nokuda kwemakwayana makono kuti zvive chinopiwa chezviyo, uye nokuda kwegwayana gono achapa maererano nezvaanokwanisa kuwana; uye kana ari mafuta, hini paefa imwe chete.+ 8 “‘Zvino jinda+ racho parinopinda, rinofanira kupinda nenzira yokuvharanda regedhi, uye rinofanira kubuda nenzira iyoyo.+ 9 Vanhu vomunyika yacho pavanopinda kuti vauye pamberi paJehovha pamwaka yemitambo,+ munhu anopinda nenzira yokugedhi rokuchamhembe+ kuti akotame anofanira kubuda nenzira yokugedhi rokumaodzanyemba;+ uye munhu anopinda nenzira yokugedhi rokumaodzanyemba anofanira kubuda nenzira yokugedhi rokuchamhembe. Hapana munhu anofanira kudzokera nenzira yokugedhi raanenge apinda naro, nokuti anofanira kubuda akananga mberi kwake. 10 Kana riri jinda riri pakati pavo, pavanopinda, rinofanira kupindawo; uye pavanobuda, rinofanira kubudawo.+ 11 Pamitambo+ nepamwaka yemitambo chinopiwa chezviyo chinofanira kuva efa nokuda kwenzombe duku uye efa nokuda kwegondohwe, uye nokuda kwemakwayana makono zvarinokwanisa kupa; uye kana ari mafuta, hini paefa imwe chete.+ 12 “‘Zvino kana jinda rikapa chinopiwa chinopiswa chakakwana kuti chive chinopiwa chokuzvidira,+ kana kuti zvibayiro zvokugoverana kuti zvive chinopiwa chokuzvidira kuna Jehovha, mumwe munhu anofanira kurivhurirawo gedhi rakatarira kumabvazuva,+ uye rinofanira kupa chinopiwa chinopiswa charo chakakwana nezvibayiro zvaro zvokugoverana sezvarinongoita pazuva resabata.+ Rinofanira kubuda, uye mumwe munhu anofanira kuvhara gedhi pashure pokunge rabuda.+ 13 “‘Zuva nezuva unofanira kupa gwayana gono, risati rapfuura gore rimwe chete, kuti rive chinopiwa chinopiswa chakakwana kuna Jehovha.+ Unofanira kuripa mangwanani oga oga. 14 Unofanira kuripa pamwe chete nechikamu chimwe chete pazvikamu zvitanhatu zveefa kuti chive chinopiwa chezviyo mangwanani oga oga, uye kana ari mafuta, chikamu chimwe chete chehini pazvikamu zvitatu nokuda kwokusasa furawa yakatsetseka.+ Chinopiwa chezviyo kuna Jehovha murau unogara nokusingagumi, wenguva dzose. 15 Vanofanira kupa gwayana gono nechinopiwa chezviyo nemafuta mangwanani oga oga kuti zvive chinopiwa chinopiswa chakakwana chenguva dzose.’ 16 “Zvanzi naChangamire Ishe Jehovha, ‘Kana jinda rikapa mumwe nomumwe wevanakomana varo chipo, kuti chive nhaka yake, icho chichava pfuma yevanakomana varo. Chichava chavo maererano nokugara nhaka. 17 Kana rikapa mumwe wevashandi varo chipo chinobva panhaka yaro, chinofanira kuva chake kusvikira gore rokusunungurwa;+ uye chinofanira kudzorerwa kujinda racho. Nhaka yaro yoga—ine chokuita nevanakomana varo—ndiyo inofanira kuramba iri yavo. 18 Jinda harifaniri kutora chero nhaka ipi zvayo yevanhu kuti rivamanikidzire kubva munzvimbo yavo.+ Rinofanira kupa vanakomana varo nhaka richitora panzvimbo yaro, kuti vanhu vangu varege kupararira mumwe nomumwe achibva munzvimbo yake.’”+ 19 Zvino akandipinza nepokupinda napo+ paiva pedyo negedhi rinoenda kudzimba tsvene dzokudyira, dziya dzevapristi, dzakanga dzakatarira kuchamhembe,+ uye tarira! paiva nenzvimbo yakanga iri ipapo kumativi ose maviri okumashure, kumavirira. 20 Akati kwandiri: “Iyi ndiyo nzvimbo ichashandiswa nevapristi kuti vabikire chinopiwa chemhosva+ nechinopiwa chechivi,+ uye yavachabikira chinopiwa chezviyo,+ kuti varege kutakura chinhu vachibuda nacho kuchivanze chokunze kuti vatsvenese vanhu.”+ 21 Zvino akaenda neni kuchivanze chokunze, akaita kuti ndipfuure ndichienda kumatanda mana epamakona echivanze chacho, uye tarira! paiva nechivanze chaiva pedyo nedanda iri repakona yechivanze, uye chivanze chaiva pedyo nedanda iro repakona yechivanze. 22 Pedyo nematanda mana epamakona echivanze chacho paiva nezvivanze zviduku, zvakanga zvakareba makubhiti makumi mana uye zvakafara makumi matatu. Zvose zviri zvina zvakanga zvakakura zvakaenzana, zviine zvivako mumakona. 23 Paiva nomutsara wematombo waizvipoterera, waipoterera zvose zviri zvina, uye paiva nenzvimbo dzokubikira+ dzakanga dzakagadzirwa pasi pemitsara yematombo yaipoterera. 24 Akabva ati kwandiri: “Idzi ndidzo dzimba dzevaya vanobika, munobikirwa chibayiro chinopiwa nevanhu nevashumiri vepaImba yacho.”+